सरकारी अनुदानमा महिलालाई विभेद, भूकम्पपीडित महिलाले अनुदान किन पाएनन् ?
सरकारी अनुदानमा महिलालाई विभेद, भूकम्पपीडित महिलाले अनुदान किन पाएनन् ? - Nepal Talk
मंसिर ६ गते, २०७४ मा प्रकाशित
भूकम्प गएको केही महिनापछि भूकम्पले भत्काएका घर बनाउन सरकारले अनुदान रकम दिन्छ भन्ने खबर सुन्दा धादिङको रुबीभ्याली गाउँपालिका, लापा गाउँकी प्रिथी वि.क. खुसी भइन्, तर उनको खुसी धेरै दिनसम्म टिकेन । किनभने उनले अनुदान पाइनन् । आफैँ घर बनाउन पनि सकिनन् ।
भग्नावशेषमाथि बसेकी प्रीथि बि.क
सञ्जुकाे अपांग बालक
उनको पहिलो बच्चा अपांग छ । उनीसँग ८० वर्षका ससुरा छन् जो ओछ्यान परेका छन् ।
त्यसैले घर व्यवहार चलाउने, तीन वटा बच्चा तथा ससुराको हेरविचार गर्ने र खेतबारीको काम गर्ने सबै काम उनी एक्लैले गर्नुपर्छ ।
मैदीकै डिलु विश्वकर्माले पनि अनुदान पाएकी छैनन् । उनले मैदीका तत्कालिन गाबिस सचिव रत्नप्रसाद श्रेष्ठसँग रकम निकासा गरिदिन माग गरिन् । “उहाँले अनुदान रकम पाउनुहुन्छ, भन्नुहुन्थ्यो । उहाँले मिलाउने कोसिस पनि गर्नुभयो तर ‘माथि’बाटै लालपुर्जा नहुनेलाई अनुदान रकम नदिनु भनेको रैछ, त्यही भएर मैले पाइनँ,” उनले भनिन् । अनुदान पाउने आशामा उनी कैयौँ पटक सदरमुकाम धादिङबेशी धाइन् । त्यसो गर्दा उनले धेरै हण्डर खानु पर्यो । “सदरमुकाम जान यसै पनि हामीलाई एक दिन लाग्छ । त्यहाँ हामीले कसैलाई चिनेको नि हुँदैन, कोसँग कुरा गर्नु बोल्नेको पीठो नि बिक्छ, नबोल्नेको चामल नि बिक्दैन भनेझैँ हामी बोल्न नसक्नेलाई कसैले नि पत्याउदैन रहेछ” उनले भनिन् ।
ज्वालामुखी गाउँँपालिका, मैदीकी देबकी अर्यालले सरकारी अनुदान लिन आफ्ना श्रीमानलाई विदेशबाट बोलाउनु पर्यो । उनका श्रीमान् खुमबहादुर अर्याल अनुदान लिनकै लागि विदेश गएको एक वर्ष नपुग्दै नेपाल फर्किन बाध्य भए । पहिलो किस्ता स्वरुप पाएको ५० हजार रुपैयाँले घरको डीपीसी गर्न पनि पुगेन । पहिलो किस्ता लिएर उनका श्रीमान् फेरि विदेश गए ।
दोस्रो किस्ता लिने बेलामा देबकीलाई समस्या आइप¥यो । पहिलो किस्ता श्रीमानले हस्ताक्षर गरेर लिएको हुनाले दोस्रो किस्ता लिनका लागि पनि श्रीमान नै उपस्थित हुनु पर्ने भन्दै मेघा बैँकले उनलाई दोस्रो किस्ताको रकम दिन मानेन । उनी अहिले दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनबाट बञ्चित छिन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगकी कानुन महाशाखा प्रमुख तथा उपसचिव सीता शर्मा अधिकारी यस विषय आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने ठान्दिनन् । उनका अनुसार, अहिलेसम्म यस विषयमा आयोगमा उजुरी नपरेकाले आयोगले केही पनि गर्न मिल्दैन । अनुदान नपाएको विषयमा कोही महिलाले आयोगमा उजुरी दिएका खण्डमा सम्बन्धित निकायलाई पत्राचार गरी न्याय दिलाउने काम आयोगले गर्न सक्ने उनले बताइन् । तर, दुर्गम ठाउँका महिला आयोगमा पुगेर उजुरी गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन् ।